Nzira yekuvakazve Tourism neZvematongerwo enyika Inobatanidzwa? Mission Haigone?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Trending Now » Nzira yekuvakazve Tourism neZvematongerwo enyika Inobatanidzwa? Mission Haigone?
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Germany Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Interviews • nhau • vanhu • Kuvakazve • ushanyi • Trending Now • Wtn
Kuvakazve Kufamba Mushure meCovid-19 ndiwo mubvunzo wakabvunzwa nemubatsiri wezvekushanya kuGerman Max Haberstroh.
Anonzwa kufunga kwekutora nzvimbo yakasimba mushure mekunge denda iri kiyi yekuvakazve.
Zvemagariro-tsika, zvakatipoteredza uye zvehupfumi zvinokanganisa misika nekwaanotarisira misika uye zvese nzanga uye (vangangoita) varidzi nevashanyi;
Yekufamba & Yekushanya kuongororwa, iro kukosha kwekukosha kwenzvimbo yedu, uye kuti yakasimba sei Tourism inopindirana nezvikamu zvinoenderana nemaindasitiri;
Kugadziriswa kwenzvimbo dzezvematongerwo enyika kusimudzira Kufamba neKushanya seyakanakisa indasitiri yebasa, uye kubatsirwa neKushanya senge seti yekutaurirana 'maturusi', kuitira kusimudzira amburera maratidziro nemufananidzo wenzvimbo / kwairi kwese kwese - senzvimbo kurarama, kushanda, kuisa mari, uye kufamba.
Kufamba & Kushanya ndiyo indasitiri yakatsaurirwa kuita kuti zviroto zviitike, izvo zvinotungamira zvishuwo zvevanhu munzira yekusununguka kufamba, kunakidzwa nekuzorora uye kunakidzwa, mitambo uye kushanya, hunyanzvi netsika, nzwisiso nyowani nemaonero. Izvi hazvisi zvinhu zvakakosha zvinoita kuti hupenyu hwevanhu huwedzere kukosha? Kufamba neKushanya, saka, hazviwane izwi rekutanga-nhanho pamatunhu, matunhu, nyika, uye epasirese matanho anodzivirira kodzero dzevanhu uye achikurudzira mabasa evanhu?
Munguva yekunyepedzera, kubiridzira, nhau dzekunyepedzera, runyararo, uye kutaura kwekuvenga, Tourism inopa nhanho yekugadzira, inomutsa zvakasikwa uye zvakajeka, hunyanzvi uye zvakasarudzika zvakasarudzika zvezvose zviri zviviri nhaka yenyika uye yavo 'Disney'-yakafuridzirwa 'rwechipiri-ruoko' nyika. Iko hakuna kudiwa kwekuratidzira chakagadzirwa zvachose: Nekudaro, pasina kuregedza chakagadzirwa, Tourism inotarisa kune 'chaiyo' - uye isu tinoziva: Kutendeseka, kureva, kunzwa kwekusabiridzirwa, kunogona zvakare kuitika mune 'vechokwadi 'nyika yehunyanzvi iyo yakafuridzirwa nemoyo - uye' hunyanzvi ', uye nekudaro yakatsaurirwa kune yakasarudzika yakanaka yeiyo' Yechokwadi, Yakanaka uye Yakanaka '.
Kunyangwe yakakamurwa kuita zviuru zvishomanana 'hove huru' uye mamirioni emakambani madiki nepakati (SME) akazvimirira nemasangano eruzhinji, Travel & Tourism inozvirumbidza pakuva indasitiri hombe kwazvo pasirese - inoshambadzwa nezvinangwa uye yakazvipira kushandira uye kupa zvinonakidza zviitiko zvekufamba. Zvakare, Tourism inozvitora seye nhamba yekutanga indasitiri yerunyararo. Izvi zvinozivikanwa kune chero munhu asiri muchikamu? Ko Kufamba neKushanya kunouya kune ino mbiri yekunyepedzera?
Chiono chekufamba nyika chakambokurudzira Thomas Cook kuronga yekutanga pasuru yekushanya. Mazana emakore gare gare, chiratidzo chekufamba wakasununguka kuyambuka miganho chakazove icho vekita chakaburitsa kuratidzira kweEast Germany Muvhuro. Pamwechete nevatungamiriri venyika vanoda rusununguko, 'basa revanhu risingagone' pakupedzisira rinotungamira kune zvakaderera kupfuura kudzvinyirirwa kweutongi hwevadzvanyiriri uye kudonha kunoshamisa kwemadziro! Kuchinja kwakadii! Imwe yemhando yakaoma kudzokororwa.
Mukudzoka, zvakadaro, maitiro ekare anoita kunge ari kubuda zvakare: Chokwadi, isu takachinja kubva kuCold War kuenda kuCold Peace, tichiziva chaizvo kuti izvi zvinopfuura kungozvidzivirira. Ndizvo here zvataida?
Mushure mekudonha kwemadziro, mikana uye mikana marongero senge kushambadza kwemwaka, yakagadzirira kutorwa. Soviet Union yakanga yatsemuka, Russia yainge yaita nyonga nyonga, asi Mutungamiri Yeltsin, aive nechinzvimbo, akazviratidza akasimba zvakakwana kudzivirira coup d'état. Makore gumi gare gare mutsivi wake Putin, kazhinji asingatariswe se "gavhuna asina chaanopomerwa" (kunyangwe aimbove chancellor Schröder weGerman ongororo yekukurumidza), akataura muGerman Bundestag uye akafara pamapati ese. Hondo yeWarsaw yakanga yaputswa, asi NATO, ichida kusunungura maEast Europe kubva kuhusiku hwavo hwe'Russia yekutyisidzira ', vakatora nguva nekumberi uye ndokuwedzera kumabvazuva. Russia yakanzwa kugogodzwa, uye kukura kwayo kwekuziva kuti ive chikamu cheEurope kwakashayikwa zvisina tsarukano. Mubatanidzwa wekumadokero wakazviratidza zvine chinangwa muchiuto asi kusaona zvematongerwo enyika. Nhasi, pachinzvimbo chekupa nyama kumweya wekutanga wekudyidzana kweEuropean-Russian, zvirinani titarise kuwedzera kweRussia.
Iwo mukana wakarasikirwa mukutanga kwema1990 kuti 'utsunge nyika itsva yakashinga': kuvhura Russia kuEurope nekuMadokero uye kukanda zvese izvo zvakaora Cold War zviridzwa kubva kune yavo inotyisa yezvematongerwo enyika vintage chimiro. "NATO yapera" - zvine basa here, sezvo zvaingova Trump kutaura izvozvo? -
Uyu mukana wakarasikirwa nevatungamiriri vanoona pahurumende, hurumende uye epamusoro-bhizinesi matanho ekuratidzira kufanoona uye kushingairira, nekutaura? Mukana wakakundikana weKufamba neKushanya, indasitiri yerunyararo yepasirose, kusiya avo vanobatirana navo 'nyanzvi yenyanga dzenzou uye voita imba yechiedza chemwenje yepasi rose: kuvhura kukakavadzana kwakasimba kwekubatana, kuyananisa misangano yepasirose-chikamu chemakiyi -asarudzo, kuronga zviitiko zvetsika nemagariro, kubatsira kusimbisa kuvimbana uye kuvimba uye kutumira mameseji akasimba eRunyararo kuburikidza neKushanya kune vanhu vari mumhirizhonga?
Maiwe, mukana wezvematongerwo enyika werudzi urwu wakapfuura, uye pfungwa dzekuumba shanduko kune zvirinani dzakarambwa kana kusiiwa dzisinganzwike.
"Pakutanga raive neshoko": Kune kuyedza mazuva ano - dzimwe nguva kunetsekana sezvavari, zvinobvumwa - kutumidza mazwi anozivikanwa: Saka, ari nyore 'host' akave angangoita mitauro kukwidziridzwa kune 'resonance maneja'. Kana iyo pfungwa yakatarisana ne 'resonance', Masangano Ekufamba & Ekushanyirana anofanirwa kuisa pfungwa iyi mukati, vachinyatso kusimudzira maratidziro avo uye kuoneka kusvika padanho rezvimwe zvinokonzeresa zvemagariro, pane kuchengetedza kukwirira kwavo sevanonetsekana vanotaura, vazvirongera kugara navo Bureaucracy yezuva nezuva uye zvipingamupinyi zveindasitiri yavo yakakamurwa.
Uhwu hunopfuura humwe humbowo hwekuti mamwe mantra evatambi 'anopokana neayo ega:' chengetedza zvematongerwo enyika kunze kweKushanya '. Zvakanaka, zvinogona kunzwisisika tichitarisa kubatanidzwa kweVashanyi mumitemo yezuva nezuva: Tourism, kuitira kuti iite zvakasununguka, inofanirwa kuregererwa kubva kuma corsets ehutongi hweveruzhinji uye kupihwa fomu rakasiyana remutemo wega. Nekudaro, pane kupokana kwakakomba kana Tourism ikakurudzirwa kuve mutambi 'kunze kwezvematongerwo enyika' zvachose.
Chaizvoizvo, UNWTO, WTTC, nemamwe masangano anotungamira muKufamba neKushanya hazvinyatso kunzwisiswa neruzhinji se 'torch relays' yeChokwadi, Yakanaka, uye Yakanaka, ayo akazvipira kuratidza uye kuita zvinopfuura miganho yeHurumende. pachezvayo uye nehukama hwayo hwepedyo.
Ivo vanofanirwa kutanga nani kudaro, tichitarisa zvirikuitika panguva uye mumashure meCovid-19 denda, uye nekuda kwenjodzi dzezvakatipoteredza uye kusagadzikana kwenzanga. Zvinotenderwa kuti chikamu cheKufamba neKushanya chishande uye mukuita kwakabatana pamwe nevatambi venyika nevekunze vanotsigira UN 2030 Agenda yeKusimudzira Kunogarika. Nekudaro, tikatora zvese zvakanaka pamwe pamwe nehunyanzvi kugona pamwe, hatigone kusvika 1,5-degree yepamusoro tembiricha yakatarwa na2040 yatove, semuenzaniso, mapato ezvematongerwo enyika kuGerman anofungidzira, kuitira kurwisa kupisa kwepasi rose. Naizvozvo, kunze kwekusimbisa kuyedza kwedu kuve neshanduko yemamiriro ekunze, isu tinofanirwa kupa mugove wedu kuti tiise mari yakawanda yekufunga pamwe nemari mukutsanangura nzira yekuti tingararama sei neshanduko yemamiriro ekunze. Kutsvaga mhinduro kunokosha mukuchengetedza rusununguko, kugara zvakanaka munharaunda, nerunyararo. Basa harigoneke here? - Usafe wakati haumbofa!
Kufamba & Tourism, seinofungidzirwa kuti Inhamba-Imwe indasitiri yerunyararo, haigoni kuzvibira kure nekuzvipira kwezvematongerwo enyika uye mutoro - inomira pakati pazvo zvese, uye inofanirwa kuyedza kutungamira kuoneka kwese kwairi kuenda, zviito, uye mhinduro dzekugadzira , mukudyidzana nemasangano ane pfungwa dzakafanana, masangano, uye makambani, senge zvikoro nemayunivhesiti, ehurumende nemasangano erudo, zvekufambisa / zvekufambisa uye Renewable Energy zvikamu, kubviswa kwemarara, kuchengetedza mvura uye mvura yemarara, chengetedzo, kuchengetedzwa kwevanhu ... Kufamba & Tourism inofanira kuwedzera huremu hwayo hwezvematongerwo enyika kuti ipe mushandirapamwe uye zvakatipoteredza zvikamu zvechisimba zvine simba kwazvo uye chiyero chekufananidzira chinokwanisika.
Zuva richangoburwa reWorld Cleanup Day, rakagamuchirwa zvikuru kuMadokero uye, sa' subbotnik '(chaizvo' Mugovera 'kuchenesa), inozivikanwa muRussia neEastern Europe, ingadai yakave muenzaniso wakanaka kutanga, seine chinangwa' prelude 'kune gore rega reNyika Yekushanyirwa Zuva Nyamavhuvhu 27.
Kuda kufunga chete?
munyori Max Haberstroh, Tourism Consultant kuGerman, Nhengo yeWorld Tourism Network
Chokwadi Chiri Nyore chinyorwa chakaburitswa naMax Haberstroh.